फेरी पुरै देश नै बन्द हुने सरकारको घो षणा आखिर कहिले बाट? हेर्नुहोस मिती समाचार | समाचार
फेरी पुरै देश नै बन्द हुने सरकारको घो षणा आखिर कहिले बाट? हेर्नुहोस मिती समाचार
September 27, 2021 NepstokLeaveaComment on फेरी पुरै देश नै बन्द हुने सरकारको घो षणा आखिर कहिले बाट? हेर्नुहोस मिती समाचार
पछिल्लो समय काठमाडौ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा फेरी सं’ क्रमित बढ्न थालेका छन् । काठमाडौको अस्पतालहरुका वेड सं’ क्रमितले भरिन थालेका छन् । एक सातादेखि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका बेड कोरोना सं’ क्रमितले भरिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। टेकु स्थित अस्पतालमा संक्रमितका लागि ४० वेड छुट्याइएको छ ।
ति सबै वेड सं’ क्रमितले भरिएका छन् ।आउँदो असोज १ गतेदेखि पुन नि’ षेधाज्ञा हुन्छ ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ। सरकारले कर उठाउनैका लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ
२ घण्टा पाङ्ग्रा नखुलेपछि आकाशमै फन्को मारेको बुद्ध एयर विमान सकुसल त्रिभुवन बिमानस्थलमा अवतरण
के नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ ? ‘एमसिसी अमेरिकाले जबरजस्ती पठाएको हो कि नेपालले नै मागेको हो ?